नरेन्द्र मोदीले दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए - Samay Dainik
नरेन्द्र मोदीले दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिए
May 31, 2019 Samay Dainik
अमित शाहसहित 24 जना क्याबिनेट मन्त्री
नयाँ दिल्ली, 30 मई।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्रमशः दोस्रोपल्ट देशको बागडोर सम्हालेका छन्। राष्ट्रपति भवनमा आयोजित समारोहमा राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले प्रधानमन्त्री मोदीलाई पद एवं गोपनीयताको शपथ दिलाए। प्रधानमन्त्रीपछि गत सरकारमा गृह मन्त्री रहेका लखनऊबाट बीजेपी सांसद राजनाथ सिंहले पद एवं गोपनीयताको शपथ दिलाए। यसरी नै तेस्रो नम्बरमा अमित शाहले क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्रीसित 24 जना क्याबिनेट मन्त्री र9जना राज्य मन्त्री (स्वतन्त्र प्रभार) र 24 जना राज्य मन्त्रीहरूले शपथ लिएका छन्।
केन्द्र सरकारमा चौथो मन्त्रीका रूपमा नीतिन गडकरीले शपथ लिए। यसपछि सदानन्द गौडाले शपथ लिए। यसरी नै गत सरकारमा रक्षा मन्त्री रहेकी निर्मला सीतारमण, एनडीएको सहयोगी दल एलजेपीका प्रमुख रामविलास पासवान, नरेन्द्र सिंह तोमार, पटना साहिबबाट जितेर आउने रविशंकर प्रसादले पनि मन्त्री पदको शपथ लिए। यसरी नै हरसिमरत कौर बादल, थावरचन्द्र गहलोतले पनि शपथ लिए।
स्मरण गराइन्छ, पूर्व विदेश सचिव डा. एस जयशंकरले पनि क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। उनी अमेरिकासित न्यूक्लियर डीलबाहेक चीनसित डोकलाम विवादलाई असल ढङ्गमा समाधान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। उनी चीन र अमेरिकामा भारतका राजदूत भएर पनि सेवा दिइसकेका छन्। उत्तरखण्डका डा. रमेश पोखरियालले पनि क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए भने झारखण्डका मुख्यमन्त्री रहेका अर्जुन मुण्डाले पनि आज क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्।
राहुल गान्धीलाई चुनाउमा हराउन सफल भएकी स्मृति इरानीले पनि मोदी क्याबिनेटमा स्थान प्राप्त गरेकी छन्। उनले आज क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएकी छन्। यसरी नै गएको सरकारमा मन्त्री रहेका डा. हर्षवर्द्धन, प्रकाश जावेडकर, रेल मन्त्री पीयूष गोयलले पनि क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए। गएको सरकारमा पेट्रोलियम मन्त्री रहेका धमेन्द्र प्रधानले पनि क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिए।
यसरी नै बीजेपीका चिरपरिचित मुश्‍लिम अनुहार मुख्तार अब्बास नकवीले पनि क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। उनले लोकसभा चुनाउ लडेका छैनन्। यसरी कर्नाटकको धारवाडबाट सांसद रहेका प्रह्लाद जोशीले 20औं क्याबिनेट मन्त्रीका रूपमा शपथ लिएका छन्। यसरी नै अन्य 24 जना राज्य मन्त्रीहरूले पनि आज शपथ लिएका छन्।
पहाडका 11 शहीदका परिवार पनि शपथ ग्रहण समारोहमा सामेल
कथनी, करणी र पार्थक्य
This Year : 78779
Total views : 1082252